‘ढलको पानीमा कोरोना भेटिँदैमा आत्तिनु पर्दैन’ «
मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले ढलको पानीमा कोभिड १९ भाइरसको अंश भेटिँदैमा समुदायमा संक्रमण फैलिएर जटिल अवस्था सिर्जना भएको भन्न नमिल्ने बताए ।
गौतमका अनुसार विश्वका अन्य देशमा पनि ढलमा भाइरसका टुक्राहरु देखिए पनि त्यसले संक्रमण फैलाएको पुष्टि नभएकाले ढलको पानीमा भाइरस देखियो भन्दैमा नआत्तिन सबैलाई मन्त्रालयले आग्रह गरको छ ।
प्रवक्ता देवकोटाले भने, ‘कोरोना भाइरस सामान्य तापक्रमको पानी जसमा क्लोरीन जस्तो जीवाणु नासक औषधि राखिएको फोहर पानी अर्थात् अस्पतालबाट निस्कने ढलको पानीमा पनि दुई दिनसम्म बाँच्ने देखिन्छ । यसरी ढलको पानीमा कोरोना भाइरसको पहिचान भए पनि यसले कोभिड–१९ सर्नसक्ने सम्भावनालाई अध्ययनले पुष्टि गरेको छैन । तैपनि अन्य संक्रमित रोगका किटाणु हुने हुनाले ढलको पानीको उचित प्रशोधन हुन जरुरी हुन्छ ।’
ढलको फोहर पानीमा सरसफाई गर्ने व्यक्ति तथा ढल व्यवस्थापनमा काम गर्ने व्यक्तिले आफुलाई सुरक्षित राख्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
प्रवक्ता गौतमले ढलको पानीमा आधारित इपिडिमियोलोजी विधिले ढलको माध्यमबाट मानिसमा कोरोना भाइरस फैलन्छ भन्ने विषयलाई नभई सो पानीमा जिवाणुको मात्रा पहिचान गरी यसका आधारमा समुदायमा संक्रमणको अवस्था बुझ्न सकिने भएकाले यस्ता अध्ययनलाई पूरक विधिको रुपमा लिन सकिने बताए ।
साथै ढलमा हाल के कस्ता भाइरस भेटिएका हुन् भन्ने विषयमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको सहयोगमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अनुसन्धान गर्ने उनले बताए ।
४१.५ प्रतिशत कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज
आइतबारसम्ममा ६५४७ जना कोरोना भाइरसबाट मुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा १३२ जना संक्रमण मुक्त भएका छन् ।
कुल संक्रमित १५,७८४ मध्ये ९२०३ को विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। कुल संक्रमितमध्ये ४१.५ संक्रमणमुक्त भएका हुन् ।
आइतबारसम्म प्रदेश १ बाट ४६९, प्रदेश २ बाट २०३४ र वागमती प्रदेशबाट २३४ जना डिस्चार्ज भएका छन् ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशबाट २१४, प्रदेश ५ बाट १७२५, कर्णाली प्रदेशबाट ११९१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ६८० जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोराना भाइरसबाट ३५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
आइतबार २९३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १५ हजार ७८४ पुगेको छ । देशका विभिन्न २५ वटा प्रयोगशालामा ४ हजार ७१० जनाको पीसीआर विधिबाट नमूना परीक्षण गरिएको थियो ।
हाल देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका क्वारेन्टिनमा ३१ हजार ५७३ जना बसिरहेका छन् भने आइसोलेसनमा ९ हजार २०३ जना रहेका छन् ।
यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले क्वारेन्टिनमा राख्ने निर्देशिका परिमार्जन गरेको छ ।
परिमार्जित निर्देशिकाअनुसार अब क्वारेन्टिनमा बसेका सबै व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा मास्क लगाउनु पर्नेछ । साथै क्वारेन्टिनमा राख्नुपूर्व र क्वारेन्टिनबाट घर पठाउनुपूर्व अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए ।
काठमाडौं उपत्यकामा ३० जना थपिए
काठमाडौं उपत्यकामा आइतबार कोरोना भाइरसका ३० जना संक्रमित थपिएका छन् ।
उपत्यकाका विभिन्न प्रयोगशालामा भएको पीसीआर परीक्षणमा ३० जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो ।
थपिनेमा काठमाडौंका २७ जना, भक्तपुरका १ जना र ललितपुरका २ जना छन् ।